Mamorona ny lalao 3D anao amin'ny iPad amin'ny Gamesculpt. Raffle code fampiroboroboana | Vaovao IPhone
Mamorona ny lalao 3D anao amin'ny iPad amin'ny Gamesculpt. Raffle ny kaody fampiroboroboana
Gamesculpt 3D dia fitaovana iray izay hanampy anao hamorona lalao 3D anao manokana amin'ny olona voalohany ho an'ny iPad, tsy mila mampiasa kaody fandaharana na manana fahalalana momba ny famolavolana. Ny zavatra rehetra ilainao dia omen'ny Gamesculpt 3D: firafitra efa voafaritra 100, firafitra noforonina tamin'ny alàlan'ny sary iray avy amin'ny tranombokinao, mozika ambadika azonao raisina avy amin'ny tranombokinao, sy ireo bara 3D. Avy amin'ireo fitaovana fototra ireo dia azonao atao ny mamorona ny lalainao manokana, shooter, arcade na tontolon'ny nofinofy.
Ireo no ilay endri-javatra lehibe misy Gamesculpt 3D misy:
- Ny fahavalo finday dia manidina faritra izay mitifitra ny mpilalao.
- Ahafahanao miditra ao anaty lahatsoratra na data ny mpilalao ka miankina amin'ny atiny misy anao no manapa-kevitra ny handefa ny fomba famaliana hafa. Mety ho an'ny teny miafina na fifanakalozan-kevitra miaraka amina tarehintsoratra.
- Izy io dia mamela ny fampifandraisan-dàlana amin'ny Processing Response amin'ireo hetsika telo (Use, Deliver or Attack) izay azon'ny mpilalao atao miaraka amin'ireo zavatra misy azy amin'ny singa rehetra ao amin'ilay haavo.
- Ahafahanao mampiasa miovaova (izy ireo dia antsoina hoe fisoratana anarana ao amin'ity App ity) sy ny toe-javatra hamoronana toe-javatra sarotra na ankamantatra ao amin'ny lalao ataonao.
- Ny mpilalao dia manana lisitry ny entana (hatramin'ny entana 14 miaraka amin'ny tondro fampiasana).
- Ny toetran'ny mpilalao dia mety ho lahy na vavy. Misy fiantraikany amin'ny feo efa voatendry fotsiny izany.
- Azo esorina ny fitaovam-piadiana sy ny fahavalo fitifirana mba hamoronana lalao tsy fitifirana.
- Ny litera kilalao dia azo ampidirina sary avy amin'ny Photo Library. Tsy mandeha ireo endri-tsoratra ireo fa afaka manakana ny lalan'ny mpilalao.
Raha andevozin'ny tontolon'ny lalao video ianao dia tsy azonao atao ny mijanona tsy manandrana Gamesculpt 3D ho an'ny iPad. Hita ao amin'ny App Store by 7,99 euros. Raha te hahazo ilay fitaovana amin'ny fomba iray ianao maimaim-poana, avereno jerena fotsiny ilay lahatsoratra ary avelao izahay hanome hevitra anay amin'ny anaranao ao amin'ny Twitter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mamorona ny lalao 3D anao amin'ny iPad amin'ny Gamesculpt. Raffle ny kaody fampiroboroboana
Davidoliverlopez dia hoy izy:
@plemeke andao jerena raha tsara vintana aho ary anjarako !!!!
Valiny tamin'i Davidoliverlopez
Carlosgar_hn dia hoy izy:
mahatalanjona ny fampiharana aho carlos manantena aho fa afaka mandresy ity fampiharana mahafinaritra ity
Valiny tamin'i Carlosgar_hn
@alexis_nhk, te hanandrana ity fampiharana ity aho
Jaume torres dia hoy izy:
Tsy fantatro ny fisian'ity fampiharana ity. Toa mahaliana tokoa, misaotra tamin'ny fotoana nahazoanao azy. Twitter: pliskin10
Valiny tamin'i Jaume Torres
Pedrowallace dia hoy izy:
@ pedrowallace2: disqus hahitana raha misy ny vintana!
Mamaly an'i Pedrowallace
Mario3ds dia hoy izy:
@ mario3ds1 dia toa tsara tarehy ilay fampiharana
Valiny amin'i Mario3ds
Mananasy dia hoy izy:
Valiny amin'ny mananasy
Jelmac dia hoy izy:
@jelmac mirary soa!
Mamaly an'i Jelmac
Etlo3d dia hoy izy:
Valiny amin'i Etlo3d
M_a_palmero dia hoy izy:
Tsara ny Mymy74. Vintana
Mamaly an'i M_a_palmero
Shinkitune dia hoy izy:
@sauldelhom liana be aho
Mamaly an'i Shinkitune
Fangatahana fandoavam-bola izay amidy (28 feb)
DataMonitor, tweak iray izay hifehezana ny fanjifana angona